Madaxweyne Obama oo keli keli ula kulmay madaxweynaha iyo mucaaridka dalka Burma | Somaliland.Org
Madaxweyne Obama oo keli keli ula kulmay madaxweynaha iyo mucaaridka dalka Burma
November 19, 2012	Burma, (Somaliland.org) Barack Obama ayaa la kulmay gabadha ku guulaysatey abaal marinta xagga nabadda ee loo yaqaanno ( Nobel Peace Prize) Aung San Suu Kyi, waxaanu kula kulmay wadankeedda Myanmar, maanta oo isniinna, isagoo ku amaanay Geesinimadda iyo go,aanka intii lagu gudda jirey booqashadan taariikhiggaa ee wakhti badan ka jirtey wadan dulmiggu si hoose uga jiro.
kulankii koowaad ee madaxweyne maraykani uu booqdo Myanmar, Obama hogaamiyayaasha dalka keenidda dhaqaalaha iyo siyaasadda fog hagaajintoodda ilaa 2011, maha in la demiyo calaamaha horumarkaa ee aynu aragnay, sidoo kale Obama ayaa sheegay booqashadiisa ( Lakeside Villa) Aung oo halkaasi ku qaadatay sanaddo xabsi guriya oo u noqonaysa mid calaamad u ah weji cusub labadan wadan. Halkan soo marista sanaddo badan oo dhibaataa, waa halka ay ku soo bandhigtay geesinimo aan cidina jebin Karin iyo go,aan. Obama ayaa sidaasi u sheegay warfidiyeenka, wakhti ay is garab taagnaayeen gabadha ay asxaabta yahiin ee ku guulaysatey abaal marinta aduunka ee loo yaqaanno ( Nobel Peace Prize), waxaanu yidhi, halkan ayey ahayd meeshii ay ka muujisay xoriyadda bili-aadminimo iyo sharafta bini-aadminimo oo aan la dafri Karin.
Madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa gaadadda gaadadda u saaray gabadhaasi mucaaridka hogaamisa Aung San Suu Kyi, kadib markii uu hadal ka jeediyey deegaankeedda Yangon maanta oo Isniinna noofenber 19. Wadankan, oo siddoo kale loo yaqaanno Burma, ayaa waxaa xukumaayey hogaamiyaasha mulateriggaa ilaa horaantii 2011, waxaanna tobanaan sanno wadankanii Siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba ka gonaa aduunka intiisa kale. Suu Kyi ayaa ku celcelisay in furitaanka Burma inuu noqon doonno mid adag. Wakhtigga noogu adage e isbedelku, waa marka aanu umalayno in guushii muuqato, dabadeed waa in aan aad uga taxadernaa in ay na soo jiidato maha dhalan habaabista guusha, waxaanu ka shaqaynaynaa dhinaca guul dhaba dadkayagga iyo saaxiibtinimadda u dhaxaysa labadda wadan ayey tidhi. Intii aanu Obama la kulmin Suu Kyi, waxuu saacad la kulmay Madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein, kaasi oo isbedelkiisa uu waddo la arkay sii deynta boqolaal maxaabiista dhinaca Siyaasadda, waxaanu dhaaqjiyey dhaqaalahii wadanka madaxweynahan maanta ee Myanmar.
Obama ayaa yidhi bilaabidda Isbedeladda dhaqaalaha iyo dimuquraadiyadda ee madaxweynahu waxay keenaysaa fursaddo horumar caqli gal ahayn, Thein Seino oo ku lebisan macawis cagaara iyo shaadh cad ayaa u sheegay Obama inay ka go,aantahay xoojinta xidhiidhka laba geesoodkaa. Wakhtigii tegitaanka ee baratakoolKa caadiggaa, ayuu Obama oo tixraacaaya Wadankan Myanmar ayaa yidhi, Magaca Myanmar waxaan na baray xukumaddii hore ee mulaterigga 23 sanno ka hor, waaxaana door bidda hogaamiyaha maanta ee dalka.
Laakiin maamulka Obama ayaa iyagu si weyn ugu dhegan Magacii Gumaysigga Ingiriiska ee Burma, kaasi oo ay siddoo kale isticimaasho Suu Kyi oo u dhaqdhaqaadda Dimuquraadiyadda. Sidoo kale kulankii Thein Sein iyo Suu Kyi, Obama waxuu qudbad ka jeediyey Jaamacadda Yangon, halkaasi oo dalka uu ku booriyey inay wadaan safarkoodda cajiibkaa ee dhinacyadda kala duwan ee horumarka.
Obama waxuu ku adkeeyey in Myanmar ay isticimaalaan kala duwanaanshaha si xoog weyn, maya si jilicsan. Intii lagu gudda jirey qaraxii ciisadeed ee ugu danbeeyey, Ururka Qaramadda Midoobey waxay sheegeen 89 qof in la diley muddo laba asbuuca 110,000 lagu bara kiciyey dalkaasi. Booqashadda madaxweyne Barack Obama ayaa ah mid taariikhiya oo lagu batitaaraaya Siyaasiyadda mucaaridkaa ee dalkaasi oo indhaha bulshadda caalamka si weyn u soo jiidatey, kadib markii Xukumaddii mulateri ee dalkaasi 15 sanno oo xadhig guriya loo taxaabay.
Previous PostMagacaabistii Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe Sadex aan wada socon: Qormadii: 26aad.Next PostHanti-dhawraha Guud oo Beeniyay inay dacwad ku soo Oogayeen Shirkad Ganacsi	Blog